Football Khabar » नेइमार चोटमुक्त हुँदै प्रशिक्षणमा फर्किए : रियल मड्रिडविरुद्ध खेल्ने सम्भावना कति ?
नेइमार चोटमुक्त हुँदै प्रशिक्षणमा फर्किए : रियल मड्रिडविरुद्ध खेल्ने सम्भावना कति ?
एजेन्सी, कात्तिक २२
फ्रेन्च क्लब पिएसजीका ब्राजिलियन स्टार नेइमार चोटमुक्त हुँदै प्रशिक्षणमा फर्किएका छन् । उनी अघिल्लो दिन प्रशिक्षणमा फर्किएका हुन् । फ्रेन्च मिडियाले नेइमारले प्रशिक्षण गर्दै गरेका तस्बिर सार्वजनिक गरेका छन् ।
नेइमार गत असोज २६ गते अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबलमा नाइजेरियाविरुद्धको खेल दौरान घाइते भएका थिए । उनी सो खेलको १३ मिनेटमै मैदान छाडेका थिए । नेइमार करिब एक महिनापछि प्रशिक्षणमा फर्किएका हुन् ।
अघिल्लो दिनबाट प्रशिक्षणमा फर्किए पनि नेइमार अहिले एक्लै आंशिक रूपमा प्रशिक्षण गरिरहेका छन् । थप जोखिमबाट बच्न उनले केही दिन एक्लै प्रशिक्षण गर्नेछन् । अनि मात्रै समूहसँग प्रशिक्षणमा भाग लिनेछन् ।
प्रशिक्षणमा फर्किएसँगै नेइमारले यस महिनाको अन्तिममा युरोपियन च्याम्पियन्स लिगको खेल खेल्ने सम्भावना बढेको छ । नोभेम्बर २६ मा पिएसजीले स्पेनिस रियल मड्रिडसँग रियलको घरेलु मैदानमा पाँचौं खेल खेल्दैछ । सो खेलमा नेइमारले खेल्ने प्रबल सभ्भावना छ । यसअघि आफ्नो घरमा भएको खेलमा पिएसजीले रियललाई ३–० ले हराएको थियो ।
प्रकाशित मिति २२ कार्तिक २०७६, शुक्रबार ११:२६